လူလား ? မူလား ? ကိုယ်စားပြု ခြင်းလား ? - Yangon Nation News
လူတိုင်းသည် တစ်စုံတစ်ရာသော အတိုင်းအတာအထိ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို၊ရေးသားနိုင်ခွင့်ရှိရပါမယ်။
ပြောခြင်ရာပြော. ဆိုခြင်ရာဆိုလို့ မဖြစ်ပေ၊
မိမိတစ်ဦးခြင်း၏ စောင့်ထိန်းကြရမည့် တာဝန်များ၊ ကျင့်ဝတ်များလည်းထားရှိကြဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
သို့ကြောင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်လူတို့၏ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆို ရေးသား ထုတ်ဖော်ခွင့်များကို ချိတ်ဆက်မှုများထားကြရပါတယ်။
အမေရိကန်အပါအဝင် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနိင်ငံအားလုံးကို ရူကြည့်ကြပါ။
အပိုဒ်(၁)….. လူတိုင်းသည် တူညီလွတ်လပ်သော ဂုဏ်သိက္ခာဖြင့်လည်းကောင်း၊ တူညီလွတ်လပ်သောအခွင့်အရေးများဖြင့်လည်းကောင်း၊မွေးဖွားလာသူများဖြစ်သည်၊
ထိုသူတို့၌ ပိုင်းခြားဝေဖန်တတ်သောညဏ်နှင့် ကျင့်ဝတ်သိတတ်သော စိတ်ဓါတ်တို့ရှိကြ၍ ထိုသူတို့သည် အချင်းချင်းမေတ္တာထား၍ ဆက်ဆံကျင့်သုံးသင့်၏။
အပိုဒ်(၂၁)/ (၁)….. လူတိုင်းတွင်မိမိနိုင်ငံ၏ အုပ်ချုပ်ရေး၌ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်လိုက်သည့် ကိုယ်စားလှယ်များမှ ဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။
(၃)….. ပြည်သူပြည်သားများ၏ ဆန္ဒသည် အုပ်ချုပ်မူအာဏာ ၏ အခြေခံဖြစ်ရမည်၊
ရွေးကောက်ပွဲတွင်လည်း လူတိုင်းအညီအမျှ ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ခွင်ဲရှိရမည့်အပြင် ထိုရွေးကောက်ပွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊အလားတူလွတ်လပ်သော မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဖြစ်စေ ကျင်းပရမည်။
အပိုဒ် (၂၉)/(၂)….. မိမိအခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လတ်ခွင့်များကိုသုံးစွဲရာတွင် လူတိုင်းသည် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လွတ်လတ်ခွင့်များကို အသိအမှတ်ပြု ၍ ရိုသေလေးစားစေရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊
ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးသောလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားအပြင်၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းရေးအတွက် တရားမျှတစွာ ကျင့်ဆောင်ရန်အလို့ငှာလည်းကောင်း၊ ဥပဒေကပြဌာန်းထားသည့် ချုပ်ချယ်မှုများဖြင့်သာ ကန့်သတ်ခံရမည်။
သို့မို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများစုတွင် နိုင်ငံ့ကိုယ်စားပြုခေါင်းဆောင်၊နိုင်ငံ့အစိုးရ
နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အရပ်ရပ်သော အရာများ၏ ဥပဒေများကို ပြင်ဆင် ပြဌာန်းခွင့်နှင့် လိုအပ်လာပါသော ဥပဒေများကို ပြုခွင့်…
ရှိကြသော အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို သူ့နိုင်ငံ၏ သူ့စံနူန်းများဖြင့် သက်တန်းတစ်ခုတစ်ကြိမ် ကျင်းပခြင်းပြုလုပ်ကြပါတယ်။
မည်သည့်နိုင်ငံကမျှ ပရမ်းပတာ၊ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ မလုပ်ကြပါဘူး။
နိုင်ငံသားတိုင်းဝင်ရောက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ခွင့် များရှိရပါတယ်။
နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့် နှင့် ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပုဒ်မ(၃၆၉)/(က)….. နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်ဖြစ်စေ၊
သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်ဖြစ်စေ၊မဆန့်ကျင်လျှင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်၊တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော် တစ်ရပ်ရပတွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးကောက်တင် မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ပုဒ်မ(၃၉၉)/(စ)….. ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးပါတီများဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများကို ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ
ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လည်းကောင်း၊လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ညွှန်ကြားချက် စသည်များကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ လည်းကောင်းထုတ်ပြန်ခြင်း။
ပုဒ်မ (၄၀၅)… နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်သည် –
(ဂ)….. နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်အဖြစ် ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်းမှတ်ပုံတင်ထားရမည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်များဆိုင်ရာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ…..
ပုဒ်မ(၉)… ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ရှိသူတစ်ဦးသည် တစ်သီးပုဂ္ဂလအဖြစ်ဖြင့်စေ၊
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခုကို ကိုယ်စားပြု၍ ဖြစ်စေ၊ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့် ရှိသည်။
အထက်ပါ ပြဌာန်းထားသည့်ဥပဒေပုဒ်မများသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေး ကြေညာစာတမ်းအပိုဒ်(၂၁) နဲ့လည်း…..
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ(၉) ၏ ဖွင့်ဆိုပြဌာန်းမူအပြင်၊
ပုဒ္မ… ၃၈(က)/(၃၆၉(က)/ ၃၉၉(စ)/(၄၀၆(က)
တို့၏ ဖွင့်ဆိုမူတိုင်းသည် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ လုပ်နိုင်ခွင့် နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုအား သက်ဝင်ယုံကြည်မူများကို ဥပဒေ ၊နည်းဥပဒေ ပြဌာန်းမူများဖြင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခွင့်နှင့် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်
အကယ်၍ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံပိုင်ခွင့်ကိုဆောင်ရွက်လိုပါက နိုင်ငံသားတစ်ဦးခြင်း၏ အခွင့်အရေးကို အသုံးပြုဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါတယ်။
ဥပဒေများ၏ ထူးခြားသည့် ဝိသေသ သည်…
ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဝင်ရောက် ရွေးချယ် ယှဉ် ပြိုင်ပါက…..
လူမူ စီးပွားရေးအဖွဲ့ တစ်ခု၊သို့မဟုတ်
သို့ပေမယ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းသည် သူ၏ မဲဆွယ်မှုကာလတွင် သူဆောင်ရွက်ခဲ့သော ၊ပါဝင်ခဲ့သော ဖြစ်စဉ်ကို လိုအပ်ပါက ဆန္ဒမဲပေးမည့် ပြည်သူကို ချပြ ပြောဆို စည်းရုံးခွင့်ရှိပါ တယ်၊
မိမိ၏ ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ကိုလည်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများထံ ဝေငှခွင့်ရှိပါတယ်။
အဘ ဦးဝင်းထိန်(NLD သဘာပတိအဖွဲဝင်)၊
ဦးကိုကိုကြီး (ပြည်သူ့ပါတီ ဥက္ကဌ)၊
တို့နှစ်ဦး အင်တာဗျူး ပြောဆို ဖြေကြားမူများသည်…..
NLD အဖွဲ့ဝင်များနှင့် သက်ဆိုင်မူမရှိ
(၈၈)မျိုးဆက် ထုကြီးတစ်ခုလုံး နှင့် လည်းသက်ဆိုင်မူမရှိပါ လို့…..
(၂၀၁၅) အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကာလက ဖြစ်စဉ်များကို သုံးသပ်ကြည်ံ့သည်အခါမှာ …
ထိုကာလ၌ NLD နှင့် ညှိကြတဲ့အခါမှာ…
(၈၈) မျိုးဆက်အနေဖြင့် ညှိနိူင်းကြတာဟုတ်ပါဘဲ ပွင့်လင်းအဖွဲ့ အနေနဲ့ ညှိနိူင်းကြတာလို့ မြင်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအပါအဝင် လူမူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးက တစ်ဖွဲ့ခြင်းဆီမှာ ပါဝင်သူများက တူညီရာတစ်ခုအနေနဲ့ စုပေါင်း
(၇၄/၇၅/ ၈၈/၉၆/၂၀၀၇) စသည်ဖြင့် တူရာ တူရာနဲ့ နီးစပ်သူတွေ စုဖွဲ့ လုပ်ဆောင်နေကြတာလည်းဖြစ်ကြသည့် အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
ထို့အပြင် (၈၈၈၈) လူထုတော်လှန်ရေးကနေ ပေါက်ဖွား ဖြစ်တည်လာခဲ့ကြသည့်…..
နိုင်ငံရေးပါတီများမှာ (၈၈၈၈) မှ ဖော်ဆောင်ပေးလိုက်သည့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းအသစ်များဖြစ်ကြသည့်…..
(27.9,1988) မှာစတင် သန္ဓေတည် ပေါက်ဖွားလာခဲ့သည့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှာ (၈၈) မျိုးဆက်အများအပြားပါဝင်ခဲ့သည်မှာ ယနေ့ထက်ထိတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။
(၈၈၈၈) လူထုတော်လှန်ရေးရပ်လိုက်ရတဲ့ အခြေအနေမှာ မိမိတို့နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေးပါတီပေါင်း(၂၄၈) ပါတီပေါ်ပေါက် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။
တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက်မှာ နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ အနှိပ်ကွပ်ခံရသော်လည်းယနေ့ထက်တိုင် အလံမလှဲ ပါဘဲ ကြံ့ ကြံ့ရပ်တည်ခဲ့ကြသည့်ပါတီများမှာ……
ယခင်တပ်မတော်အစိုးရခေတ်ကာလမှ လူပ်ရှားမူမရှိတော့သော တိုင်းရင်းသားပါတီတစ်ချို့နှင့် ရန်ကုန်အခြေစိုက်ပါတီများလည်းရှိပါတယ်။
အားလုံးသည် (၈၈) နိုင်ငံရေးအသစ်မျိုးဆက်များစွာကို အခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းထားကြပါတယ်။
မိမိတို့တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဒမိုကရေစီ စနစ်သစ်ဆီသို့ တော်လှန်ရေးအသွင်နှင့်…
ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့် သွားနေကြသည့် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လူမူ လူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းများမှာ…
အဘ ဦးဝင်းထိန် နှင့် ဦးကိုကိုကြီး တို့
နှစ်ဦး၏ သတင်းမီဒီယာများသို့ အင်တာဗျူးမူ ပြောဆိုမူများသည်ကား…..
(၈၈) မျိုးဆက်နှင့် NLD တို့၏ တိုက်ပွဲမဟုတ်သလို ရန်ဘက်အသွင်လည်း မဆောင်နိုင်ပါစေကြောင်း…..
စာရေးသူမှ မိမိ၏ အမြင်ကိုရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
စာရေးသူ မိမိ၏ အမြင် ၊ယူဆချက်သာဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံသားတစ်ဦး၏ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည့် လွတ်လပ်သော ရေးသား ထင်မြင်မှုဖြစ်ပါတယ်။